အင်တာနက်စသုံးကတည်းကလူတွေအတူတူနေပြီးစကားပြောကြတဲ့အခန်းတွေ၊စကားပြောကြတဲ့အခန်းတွေအများကြီးပါ။ အခုတော့အဲဒီချက်တင်အခန်းပေါင်းသင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်နိုင်သည့်မှတဆင့်အခြားသောလမ်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခမဲ့မှုတ်ဆေးညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်,သင်အကောင်းဆုံးအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှရှိပါတယ်တဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်လုပ်ကြံဆေးညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံများကိုပူဇော်ဖို့ပထမဦးဆုံးဆိုဒ်များထဲကတစ်ခု။ သင်သည်များစွာသောလူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်ညစ်ညမ်းလောကီသားတို့သည်အရိုင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုခံစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်သောဝဘ်ပေါ်တွင်အပူဆုံးဂိမ်းအချို့ကိုရလိမ့်မည်။, ဒီဂိမ်းထဲမှာအပြန်အလှန်ချက်တင်နှင့်ယုတ်ဂိမ်းကစားနှစ်ဦးစလုံးမှလာကြလိမ့်မည်။ အခြေခံအားဖြင့်သင်သည်ဤဂိမ်းများတွင်သူစိမ်းများနှင့်လိင်ဆက်ဆံနိုင်သည်။ ထိုအသင်ခံစားနိုငျဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအင်္ဂါရပ်များရှိပါတယ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသောဤဆိုဒ်အသစ်နှင့်ပတ်သက်၍အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာအရာရာတိုင်းအခမဲ့လာသောအချက်ဖြစ်သည်။ သင်ဘာမှမများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးမသာ,ဒါပေမယ့်သင်ပင်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးရန်မလိုပါ။ ဒါဟာဖြောင့်ရှေ့ကိုညစ်ညမ်းအတှေ့အကွုံင်,လျော့နည်းကြော်ငြာတွေနဲ့ပိုပြီးအပြန်အလှန်နှင့်အတူမည်သည့်လိင်ပြွန်ပေါ်တွင်ရှိသည်နှင့်ဆင်တူသည်။ ဒီဆိုက်ရဲ့နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ သင္၏ဘေရာက္ဇာထဲသို႔ တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာမည္သည့္ကိရိယာတြင္မဆို၎တို႔ကိုကစားႏိုင္မည္ဟုဆိုလိုပါသည္။, ဤသည်ကိုအတူတကွကွန်ပျူတာညစ်ညမ်းနှင့်မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဆောင်တတ်၏သောဆိုက်ဖြစ်ပါသည်,ထိုသို့ပြုနေစဉ်,ဒါကြောင့်လည်းအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများပေါ်တွင်အွန်လိုင်းကလူရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံထား,သင်အမြဲအတူကစားရန်အဘယ်သူကိုရှိလိမ့်မည်နိုင်အောင်.
ဤသည်အစဉ်အမြဲသင်ကစားရန်တစ်ခုခုပေးလိမ့်မည်ဟုစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတွေဟာများပြားလှပြီးသူတို့ကလူတွေအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အခြေခံထားတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏စုဆောင်းမှုသည်သင့်အတွက်ဂိမ်းအချိန်ထွက်ပြေးရန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ရုံကဒီမှာလာသင့်ရဲ့မျိုးကွဲဝေမျှကြသူလူသစ်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်ကြသည်။ စကားပြောခြင်း၊ကစားသမားအားလုံးအတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ယောက်ျားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်သည့်အတွက်ဖြောင့်ဂိမ်းရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကစားသမားအမျိုးသမီးများဖြစ်သည့်အတွက်ယောက်ျားနှင့်လိင်တူချစ်သူဂိမ်းများဖြစ်သည့်အတွက်လိင်တူချစ်သူဂိမ်းများရှိသည်။, ငါတို့သည်လည်းသင်သည်မည်သည့်လိင်နှင့်အတူကြက်တိုက်ဖန်တီးနှငျ့သငျမြေပုံပေါ်တွင်တွေ့ဆုံရန်မည်သူမဆိုနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနိုင်သည့်အတွက်ရောထွေးကွိမျဂိမ်းရှိသည်။ ဤဂိမ်းများတွင်ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးရှာရီယာဖန်တီးခြင်း၏ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူလာကြ၏။
သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ပါ၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအမျိုးအစားများစွာမှဂိမ်းများလည်းရှိသည်။ ဤသူသည်သင်တို့လိမ်ဂိမ်းကိုတွေ့လိမ့်မည်ရှိရာအနည်းငယ်ဆိုဒ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်ကအတိအကျသင့်ရဲ့အပျော်တမ်းတူသောကြက်ဖဖန်တီးပြီးတော့အတူပျော်စရာရှိသည်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှအချို့သောကာတွန်းဂိမ်းရှိသည်,သင်သည်ထိုသူတို့အတွက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်မူရင်းဇာတ်ကောင်မှတပါး,သင်သည်လည်းကျော်ကြားသောကာတွန်းဇာတ်ကောင်အပေါ်အခြေခံပြီးအဆင်သင့်လုပ်အရေခွံကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအများစုဟာအခြေခံအားဖြင့်အခြားဇာတ်ကောင်လည်းအစစ်အမှန်ကစားသမားဖြစ်သည့်အတွက်လိင်ဃဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးကြက်သေသေချာချာဖန်တီးပြီးတော့သင်မြေပုံပေါ်တွင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ေျမပံုမွာလူမ်ားစုေ၀းမည့္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ သင်တစ်ဦးအခြို့သောတည်နေရာအတွက်လူတိုင်းနှင့်အတူစကားပြောခန်းနိုင်ပြီးသင်သည်လည်းအချို့သောကစားသမားတွေနဲ့တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းကိုသင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းကမ္ဘာတွင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်ရိုင်းသောမျိုးနှင့်ခြီးမွှောအချို့နှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လိင်ဆက်ဆံဖော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။, နှင့်အရာအားလုံးကိုသင်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌လိင်ရှိသည်အခါသင်နီးပါးရှိသူများကဲ့သို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်ကစားနေစဉ်သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လက်တွေ့ကျကျခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးအတွက်,ဤသူသည်သင်တို့၏ညစ်ညမ်းညဖြုန်းဘယ်လိုပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်ဟုအရာဖြစ်တယ်. အခမဲ့မှုတ်ဆေးညစ်ညမ်းဂိမ်းအပြန်အလှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေး၏အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။